Puntland oo sheegtay in dowladda duulaan ku tahay Degmada Burtinle | Dhacdo
Home Wararka Maanta Puntland oo sheegtay in dowladda duulaan ku tahay Degmada Burtinle
Puntland oo sheegtay in dowladda duulaan ku tahay Degmada Burtinle
Wasiirka Qorsheynta Puntland, Cabdiqafaar Cilmi Xaange ayaa Dowladda Federaalka ku eedeeyay inay gadaal ka riixeyso qorshe ay muddo kororsi ku sameynayso iyo inay dalka dib ugu celinayso waqtigaa adkaa, ee uu ka soo gudbay.
Wasiirka ayaa sheegay inuu socdo qorshe aan lagu dhawaaqin, balse ay Dowladda Federaalka muddada ku kordhineyso, taasoo sida uu sheegay ay xiggi doonto caburin iyo in lagu duulo qaybo ka mida Puntland.
“Waxaan rabaa dadweynaha Soomaaliyeed inaan u sheego waxaa cad oo meeshaan la qarinayaa, oo aan horey loo sheegin oo Dowladda Federaalka aysan ku dhawaaqin, laakiin in badan laga hadlay waxa weeye, waxaa meesha ka socda ajande qarsoon oo ah ku darsasho.” Ayuu yiri Wasiirka.
Waxa kaloo uu yiri “Waxaa taas barbar socdo marka ku darsashada la sameeyo in caburintii halkaa laga sii wado, dadka Soomaaliyeed-na qori leeskugu dhiibo. Meelaha dagaalka laga wado waxaa ka mid ah Gedo oo ciidamada lagu sii daabulayo.”
“Waxaa hadda warbixinta nagu soo gaareysaa oo masuuliyiintan qaarkood ka hadleen meelo ka mida Puntland la rabo in weerar laga bilaabo, oo ay lahaayeen ciidamadii ayaa Burtinle la keenayaa. Nasiib-darro Somaliya cid xoog ku juujuubi karta ma jirto.” Ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirka Qorsheynta Puntland ayaa tilmaamay in doorashada ay lafdhabar u tahay dimoqraadiyadda iyo dowladnimada, isla-markaana ay doonayaan in Villa Somalia ay dalka ka qabato doorasho hufan, amnigeedana la hubo.
“Waxaa la yiraahdaa doorasho waxay lafdhabar u tahay dimoqraadiyadda iyo dowladnimada, sideedaba doorashaa lafdhabar u ah. Waa tartan, daahfurnaan iyo isla xisaabtan. Waxaan rabnaa inay doorasho xor ah dhacdo, sidii lagu heshiin lahaa oo amnigeeda la hubo, oo doorashada Baydhabo, Kismaayo, tan Muqdisho ka dhaceyso iyo Garoowe inay isku mid noqdaan.” Ayuu yiri Wasiir Xaange oo hadalkan ka sheegay Barnaamijka Doodda Jimcaha ee BBC.
Hadalka Wasiirka ayaa imaanaya, maalmo yar uun ka dib markii Dowladda Federaalka ay Maamulada Puntland iyo Jubbaland ku eedeysay inay curyaamiyeen wadahadalada xalka loogu raadinayo arrimaha doorashooyinka ee dalka.
Previous articleCiidamadii difaacay Awdheegle iyo Bariire oo la dalacsiiyay (SAWIRRO)
Next articleMadaxweynaha Jabuuti oo markii 5aad xilka loo doortay